"हामी त बूढी भैसक्यौं, क्या अर्न (के गर्न) हस्पताल जाने हो ?"
यौन व्यवसायी महिलाहरूसँग यौन व्यवसायमा लाग्नुको कारण सोध्दा उनीहरूको सटिक जवाफ हुने गर्दछ– आर्थिक वाध्यता । यद्यपि उनीहरूको आर्थिक वाध्यता मात्र यौन व्यवसायमा लाग्न प्रेरित नगरेको यस लेखकको ठम्याई छ । अर्थात, आर्थिक वाध्यता मात्र नै सबै कुरा नभएको देखिएको छ ।
जीवनलाई बुझ्न थालेदेखि (२०२८-०२९) राजनीतिमा होमिनु भएकी अष्टलक्ष्मी आफ्नो जीवन सारपूर्ण भएकोमा खुसी हुनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, "मैले राजनीति बेक्कार गरें भन्ने कहिल्यै लागेन, बरु देशमा भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र २०७२ सालमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएकोमा गौरव लाग्छ ।"
पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रको राम मन्दिर (आर्यघाट पारी) भन्दा बायाँ जंगल छेउमा रहेका साना साना मन्दिरहरुमध्ये एउटामा एक झिसमिसे बिहान धेरैको आँखा सोझिएको थियो । त्यति बेला त्यहाँ पाँच छ जना सडक बालकहरु र तीन चार जना वयष्क बटुवाहरु थिए । एक जना वयष्क भने मुर्मुरेर त्यतातिर लम्कँदै आइरहेका थिए । ती वयष्कका साथमा रहेको बालकले ‘ऊ त्यहीं हो’ भनेर देखायो ।
माल्दिभ्सको एक उद्योगमा दुई वर्षकाम गरेर फर्किएकी प्रतिमा आफैले पसल संचालन गरेर परिवारको सहारा बन्न सकेकोमा गौरवगर्छिन् ।
सूचना प्रविधिमा भएको विकास सँगै छापा मिडिया अब लोप हुँदै जानेछ भन्ने अडकलबाजी भएपनि नेपालमा छापा पत्रपत्रिकाहरु मूलधारमा नै छन् ।
भिक्षु जीवनमा प्रवेश गर्नुअघि उनीहरु श्रामणेर भई विद्याध्ययन गर्नु पर्दछ र यो अवस्थालाई बौद्ध समाजमा श्रामणेर भनिन्छ ।
शंखधर साख्वाःको मुहार भनी अनेकौं तस्वीरहरु बजारमा पाइन्छन् जसले बेग्लाबेग्लै मुहारहरु प्रस्तुत गर्दछ । यसमा कसैको नियन्त्रण भएको पाइँदैन ।
कुनै बेलाको गुलजार बस्ती, शहर वा व्यापारिक केन्द्र समयको क्रममा उजाड र उराठ लाग्दो बन्न सक्छ । त्यस्तै कुनै समयको सानो गाउँले अचानक वा शनैःशनैः ठूलो शहरको रुपमा लिनसक्छ ।
बम्वईमा खाना खाने ठाउँमा पु-याउँदा म रोएर आँसुको धारा हुँदा पनि कसैले वास्ता गरेन, जबकि त्यहाँ पचास–साठी जनाको ओहोर दोहोर भइरहेको थियो । कसैले केही बोलेनन् पनि । मलाई लग्ने मान्छेले मलाई त्यहीं छाडेर चिठ्ठी पु-याउन जानुछ भनेर गयो ।
मधेशका हाम्रा दाजुभाई दिदीबहिनीहरु र नेवार दाजुभाई दिदीबहिनीहरु बीच यस्ता सतही ज्ञान भएका व्यक्तिहरु मार्फत नचाहिँदो तनाव र वैमनश्यता रहिरहेको भए, भरोसा छ, यस लेखले पक्कै समाधान गर्नेछ।
एक जमाना थियो, गन्धर्व समुदायलाई सारंगीसँग मात्र जोडेर हेरिन्थ्यो र समुदायको पहिचान भनेकै सारंगी हुन्थ्यो । तर परिवर्तित सामाजिक परिवेशमा यो समुदाय सारंगीबाट टाढिंदैछन् । पढेलेखेका गन्धर्वहरू सारंगी रेट्दै गाउँघरमा गीत गाएर हिड्न छाडेपछि पुराना पुस्ताका गन्धर्वहरू भने आटिन थालेका छन् ।
नेपालमा धार्मिक सद्भाव र सहिष्णुताको अनुभव बौद्ध धर्मावलम्बीहरुले गर्न पाएका छैनन् । आफूहरु अपमानित हुनु परेको तीतो अनुभव गरिरहेका छन् ।
डा. मदन पियालाई आफू छाति रोग विशेषज्ञमात्र हुँदा क्यान्सर विरामीप्रति झर्को लाग्दथ्यो तर अहिले उहाँ झर्को होइन यिनै विरामीहरूको उपचारमा दिन विताउनुहुन्छ ।
१० बर्षे द्वन्द्वकालका बेला आफ्ना र आफन्त गुमाएका, घाईते भएका , बिस्थापित भएकाहरुका लागि नेपाल सरकारद्धारा सीप कार्यक्रममा डडेल्धुरा जिल्लामा अधिक मात्रामा महिला सहभागिता देखिएको छ ।
बालविवाहका कारक तत्व तथा कारणहरू जेसुकै भए पनि त्यसको प्रभाव भने प्रत्यक्ष रुपमा विवाह गर्ने बालिका तथा महिलाले नै भोग्नु पर्ने यथार्थ हो ।
बर्दियाकी सुमा थारु स्टाफ नर्सको तयारीमा जुटेकी छिन् । ७ बर्ष कमलरी बसेर मुक्त भएकी उनी नेपालगञ्जमा बसी स्टाफ नर्सको तयारीमा जुटेकी हुन् । ‘एकै पटक कक्षा ४ मा भर्ना भएँ , जस्तोसुकै समस्या परे पनि पढाईलाई निरन्तरता दिदै यहाँ सम्म आएँ’ उनले आफ्नो इच्छा ब्यक्त गरिन्– ‘सानै देखी पढ्ने रहर थियो, अझै पढ्ने रहर छ’
आज समाज र संसारभरी महिला वर्ग माथिको दमन र हिंसा बढ्दो छ । परिवारदेखि समाज, राष्ट्र र विश्वव्यापी पितृसतात्मक व्यवस्था भएकोले यो सत्ता दमनकारी र अत्याचारी भएको हो । प्रायः शासकवर्गले कमजोर वर्गलाई आफ्नो स्वार्थमा नचाउन र हैकम जमाउन शक्तिको प्रयोग गर्छ ।
भारतको नयाँ लिल्लीमा गत डिसेम्वरको १६ पछिका दिनहरु जनपदर्शनले उग्र रुपमा नै लियो । यो रुप व्रिटिस साम्राज्य विरुद्ध ‘भारत छोड’ आन्दोलनपछिको सबवैभन्दा ठूलो मानिन्छ । डिसेम्वर १६ तारिखको रात सार्वजनिक यातायातमा सवार एक २३ वर्षिया युवती दामिनीमाथि गुडिरहेको बसमा नै सामुहिक बलात्कार भएको थियो । यो त्यही बलात्कारविरुद्धको जनप्रदर्शन हो । अब प्रश्न उठ्छ, बलात्कारको यो घटना भारतमा पहिलो पल्ट भएको हो त ?
विवाह भनेको के हो र यो कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा नपाउने उमेरमा गंगाको विवाह भयो । पढ्ने, खेल्ने र हाँसेर विताउने उमेरमा अन्जान घरमा गएर चुलोचौको सम्हाल्नुपर्दा उनी यसो भन्छिन्, ‘खाना पनि पकाउन आउँदैनथ्यो । घरमा दुःख थिएन तर सानैमा विवाह गरेपछि मैले धेरै समस्या भोगें ।’ उनको जन्मस्थान सल्लाघारी, भक्तपुरमा विद्यार्थीहरुले कक्षा ७ सम्म निःशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था थियो । पढ्नलाई भनेर कहिलेकाँही उनी स्कुलमा पनि पुग्थिन् ।
देशमा भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनले कैयन नागरिकको अधिकार स्थापित गर्न मद्दत्त ग¥यो तर यि राजनीतिक परिवर्तनले महिला मानव अधिकारको उपहास गरेको कुरा हालको वहसले छर्लङ्ग पारेको छ । संविधानसभाले ल्याउने संविधानमा महिलाको हकमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था समान होला भन्ने अपेक्षामा महिला अधिकारकर्मीहरू सशंकित हुन थालेका छन् ।
बालिकाको सामाजिक रुपान्तरण सजिलो छैन
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्येक बालबालिकालाई पालन पोषण, आधारभूत स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै प्रत्येक बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको शोषणविरुद्धको हक हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर नेपाली समाजका अधिकांश बालिकाहरूले यी उल्लेखित हकको अभाव महसुस गर्दै आएका छन् ।
काठमाडौं बदनाम गर्ने देह व्यापारीहरु
नेपाली भाषाका कवि भानुभक्त आचार्यलाई उहिलेको काठमाडौंको सौन्दर्यले निकै प्रभावित पारेको थियो र सौन्दर्यात्मक कविता नै सिर्जना भयो । उही भानुभक्त अहिलेको काठमाडौं भ्रमणमा आएका भए उनमा के प्रभाव पथ्र्याे होला ? कुन्नी । तर यौनका कविता र कहानी लेख्ने साहित्यकारको कमी छैन अहिले यहाँ । उहिलेका सुन्दरीहरूले भानुभक्तलाई सौन्दर्यको कविता लेखायो, अहिले यौनका कविता र कहानी लेखाउने देहव्यापारीहरूको भीड लागेको छ ।
बढ्दैछन् भाडाका आमाहरू
शरीर महिलाको, निर्णय नगदको